चाउरीपना घटाउने अचुक उपाय…जानी राखे राम्रो - Ektm news
Home›स्वास्थ्य›चाउरीपना घटाउने अचुक उपाय…जानी राखे राम्रो
चाउरीपना घटाउने अचुक उपाय…जानी राखे राम्रो
राम्रो बन्न कस्लाई मन लाग्दैन होला र..? तर पनि हाम्रो ब्यस्त जीवन शैलीले गर्दा हामीले आफ्नो सुन्दरताको हेर -चाह गर्ने समय पाईरहेका हुन्नौ । यसैले गर्दा हाम्रो अनुहारमा बिभिन्न किसिमका दाग र चाउरीपना देखिन थाल्छ । आफुलाई सधैं जवान र राम्रो देखिन चाहानु हुन्छ भने आउनुस यी कुराहरु पढ्नुस.. । स्किन फर्माकोलोजी एंड फोजियोलोजी जर्नलमा प्रकाशित समाचारका अनुसार दुईवटा नयाँ कुरा पत्ता लगाएको छ।
नयाँ किसिमको कोलिजन प्रोटीन सप्लीमेन्ट सेवन गर्दा अनुहारको चाउरीपना कम हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लागेको छ। रिसर्चरका अनुसार उक्त प्रोटीन सेवन गर्दा ८ हप्तामा २० प्रतिसत सम्म चाउरीपना कम हुन सक्छ ।
रिसर्चको बेलामा २०० जना महिलालाई वेरिजोल नामको कोलाजन सप्लीमेन्ट खाना दिई परिक्षण गरिएको थियो । यसो गर्दा ४५-६५ बर्षका महिला मध्य ११४ जना को ८ हप्तमा २० प्रतिशत अनुहारको चाउरीपना कम भएको थियो भने बाँकी केहि महिलाको आँखा मुनिको चाउरीपना ५० प्रतिशतले कम भएको थियो ।
रिसर्चरका अनुसार कोलाजन पेप्टाईन हाम्रो शरीरमा बढि मात्रामा हुन्छ त्यसैले यो सप्लीमेन्टको सेवन गर्नाले धेरै एंटीरिंकल उत्पादनमा यसको प्रयोग हुन्छ र नयाँ चाउरीपना आँउन दिदैन। यो एकदमै प्रभावकारी तरिका हो ।
मधुमेहका रोगीले खानैपर्ने १२ प्रकारका खानेकुरा
यी लक्षणलाई नगर्नुस् बेवास्ता, हुन सक्छ मिर्गौलाको ...
मात्र ३ दिनमै गोरो हुन मन छ ? अप्नाउनुहोस् यी घरेलु उपाय (तरिकासहित)
सुक्खा पहिरो कारण मुग्लिन सडक खण्डमा माइक्रो बस दुर्घटना, चालकको मृत्यु
खोपे को ट्याटु हटाउदा भयो यस्तो हालत (फोटो सहित)
सार्वजनिक बिदा बारे आयो सरकारको यस्तो खबर.
यौनसम्पर्कपछि पुरुषहरू किन कोल्टे फेर्छन् ?
५ मिनेटमै ढाड दुख्ने र खुट्टा दुख्नेसमस्याबाट छुट्कारा, मात्र यी ५ सरल व्यायामबाट (दिनहुँ गर्नुस् फिट रहनुस्